MAQAL: Xaflad lagu soo dhaweynayo Madaxweyne Faroole laguna xusayo 26juun oo Dubai ka socota – SBC
MAQAL: Xaflad lagu soo dhaweynayo Madaxweyne Faroole laguna xusayo 26juun oo Dubai ka socota
Magaalada Dubai xarunta dalka Imaaraadka Carabta waxaa ka socda xaflad lagu soo dhaweynayo madaxweynaha Dowlada Puntland Dr C/raxmaan Maxamed Maxamuud Faroole iyo wafdi uu horkacayo oo ku sugan magaaladaas.
Xafladaas waxaa soo qaban qaabiyay jaaliyada Soomaalida ee ku dhaqan wadankaasi carbeed, kuwa reer Puntland iyo weliba jaaliyadaha Maamul goboleedyada kale siiba Maamul goboleedka Jubaland.
Sidoo kale Xafladan waxa lagu xusayaa sanadguurada 53aad ee ka soo wareegatay xornimada gobolada Waqooyi ee Soomaaliya oo ku beegneyd maanta oo ay taariikhdu taahy 26th june 2013.
Masuuliyiin, siyaasiyiin, Ganacsato iyo weliba dadweynaha jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan isutaga imaaraadka Carabta ayaa ku sugan xaflada waxaana hadalo kala duwan ka jeediyay Xubnaha wafdiga uu horkacayo madaxweynaha iyadoo iminkadanna uu xaflada ka hadlayo Madmaxweynaha Puntland Dr C/raxmaan Faroole.
Madaxweynaha Waxa uu ka hadlay arimo badan oo ay ugu weyntay siyaasada Puntland, tan Soomaaliweyn arimaha Tastuurka, iyo weliba marxalado kala duwan oo taabaneysa siyaasada Soomaalida.
Waxaa kale oo uu madaxweynuhu ugu hambalyeeyay shacabka Soomaaliyeed Maalinta sanadguurada 53aad ee xornimada gobolada Waqooyi ee dalka, isagoo sidoo kale uga mahadceliyay jaalliyada Soomaaliyeed ee Imkaarada Dubay sida ay u soo dhoweeyeen.
DHAGEYSO KHUDBADA MADAXWEYNE FAROLE RIIX AMA DAAR